Isivumelwano kunye neTestamente eBhayibhileni
Igama lesiHebhere elisemnqophisweni li- berit , elithetha "ukubopha okanye ukubopha." Kuguqulelwa kwisiGrike njengesi- syntketi , "ukubopha kunye" okanye i- diatheke , "iya kuthi, ityala." EBhayibhileni ke umnqophiso ubuhlobo ngokuzibophelelana. Ngokuqhelekileyo kuquka izithembiso, uxanduva, kunye nemikhuba. Iimvumelwano zomnqophiso kunye nomnqophiso zingasetyenziswa ngokungafaniyo, nangona umnqophiso uthetha ukusetyenziswa ngokumalunga namaYuda kunye noThixo.
Umnqophiso womnqophiso okanye umnqophiso uvame ukubonwa njengobudlelwane phakathi koThixo kunye noluntu, kodwa eBhayibhileni kukho imimiselo yeemvumelwano eziqinileyo: phakathi kweenkokheli ezifana noAbraham noAbhimeleki (Gen 21: 22-32) okanye phakathi kookumkani nabantu bakhe njengoDavide noSirayeli (2 Sam 5: 3). Nangona kunjalo, ezo zivumelwano zazihlala zibhekwa njengongamela ngumbutho onokunyanzelisa amalungiselelo ayo. Iintsikelelo zihambelana nalabo abathembekileyo, iziqalekiso kwabangenayo.
Umnqophiso ka-Abraham weGenesis 15 yinto apho uThixo athembisa khona uAbraham umhlaba, inzala engenakubalwa, kunye nolwalamano olulodwa oluqhubekayo phakathi kwale nzala noThixo. Akukho nto ibuzwayo ngokubuyisela-kungekhona uAbraham okanye inzala yakhe "inetyala" kuThixo nantoni na ngokutshintshela umhlaba okanye ubuhlobo. Ulwaluko kulindelwe njengomqondiso walo mnqophiso, kodwa kungekhona njengentlawulo.
Umnqophiso kaMoses kwiSianai kunye namaHebhere
Eminye iminqophiso eyenziwa nguThixo njengokuba yenziwe ngabantu "ingunaphakade" ngolu hlobo lokuba "akukho lucala" loluntu olufunekayo abantu ukuba bangawupheli umnqophiso. Umnqophiso kaMoses kunye namaHebhere eSinayi, njengoko kuchazwe kwiDuteronomi , yinto enzima kakhulu ngenxa yokuba ukuqhubeka kwalo mnqophiso kuxhomekeke kumaHebhere ekuthobela uThixo ngokuthembeka nokwenza imisebenzi yabo.
Enyanisweni, yonke imigaqo ngoku ilawulwa nguThixo, njengokuba ukuphulwa kwezono ngoku.
Umnqophiso kaDavide we-2 Samuweli 7 yinto apho uThixo athembisa khona ubukumkani basigxina bookumkani esihlalweni sakwaSirayeli ukusuka kwisizukulwana sikaDavide. Njengomnqophiso ka-Abraham, akukho nto ibuzwayo ngokubuyisela - ookumkani abangathembekanga banokuhlawulwa baze bagxeke, kodwa umgca kaDavide awuyi kupheliswa ngenxa yoko. Umnqophiso kaDavide wawuthandwa njengokuba wathembisa ukuzinza kwezopolitiko, ukukhuseleka kwintente ethempelini, kunye nobomi boxolo kubantu.
Umnqophiso wehlabathi kunye noNowa
Enye yezivumelwano ezichazwe eBhayibhileni phakathi kukaThixo nabantu "umnqophiso" emva kokuphela koMkhukula. UNowa ubungqina obuphambili kuyo, kodwa isithembiso sokungaphinda sitshabalalise ubomi kwinqanaba elinjalo senziwa kubo bonke abantu kunye nazo zonke ezinye izinto emhlabeni.
Imiyalelo Elishumi njengesivumelwano somnqophiso
Kucetyiswa ngabaphengululi abathile ukuba iMithetho Eyishumi iyaqondwa kakuhle ngokuyithelekiswa kwezinye zezivumelwano ezibhalwa ngexesha elifanayo. Kunokuba uluhlu lwemithetho, imiyalelo yile mbono ngokwenene isivumelwano phakathi kukaThixo nabantu bakhe abakhethiweyo, amaHebhere. Ulwalamano oluphakathi kwamaYuda kunye noThixo ke ubuncinane ngokomthetho njengoko lubuqu.
ITestamente Elisha (umnqophiso) wamaKristu
Kukho iintlobo ezahlukeneyo ezifunekayo kumaKristu okuqala ukususela ekuhlakuleleni zabo iinkolelo zomnqophiso. Umbono oqaqambileyo womnqophiso wawuxhomekeka kakhulu kwiimodeli zika-Abraham kunye noDavide, apho abantu babengenakukwenza nantoni ukuze "bafanelwe" okanye bagcine ubabalo lukaThixo. Babengenanto yokuyiphakamisa, kwafuneka bamkele oko uThixo ayenayo.
ITestamente Endala ngokuTestamente eNtsha
NgokwamaKristu, umxholo wesivumelwano wasetyenziselwa ukutyumba umnqophiso "omdala" kunye namaYuda (iTestamente Elidala) kunye nomnqophiso "omtsha" nabo bonke abantu ngokufa kukaYesu (iTestamente Entsha). AmaYuda, ngokwemvelo, ayichasene nezibhalo zabo ezibhekiswa kuwo njengesivumelwano sokudala "ngenxa yokuba, umnqophiso wabo noThixo ukhoyo kwaye ufanelekile - kungekhona imbali yembali, njengoko kuchazwe igama lesiGrike.
Yintoni umnqophiso wezeMfundiso?
Ephuhliswa yiPurians, i-Theology Theology ngumzamo wokudibanisa imfundiso emibini ebonakalayo yodwa: imfundiso yokuba kuphela abakhethiweyo abanako okanye baya kusindiswa kunye nemfundiso yokuba uThixo ulungile ngokuthe tye. Emva koko, ukuba uThixo unobulungisa, kutheni uThixo engavumeli mntu ukuba asindiswe kwaye endaweni yoko ukhetha nje ezimbalwa?
Ngokutsho kwePuritans, "umnqophiso kaNyana" kaThixo kuthi kuthi nangona singenako ukukholwa kuThixo ngokwabo, uThixo unokusinika amandla - ukuba sisisebenzisa kwaye sinokholo, siya zigcinwe. Oku kufuneke ukuphelisa ingcamango yokuba uThixo uthumela abanye abantu ukuba ahambe kunye nokuya esihogweni , kodwa uyayitshintsha ngoluvo lukaThixo osebenzisa amandla aphezulu ukuba anike abanye abantu amandla okuba nokholo kodwa kungabikho kwabanye . AmaPuritan akazange asebenze ngendlela umntu ayenokuthi azenze ngayo ukuba ngaba ngabakhethiweyo okanye cha.
Ingqwalaselo yeGenesis eBhayibhileni
Indlela Yokubiza "AbaSadusi" EBhayibhileni
Homer kunye neVangeli likaMarko
Ngaba Ndithenga IBhayibhile YeBhayibhile?
Imimoya yamaHollywood Legends, Icandelo 1
10 Amazwi malunga nePterodactyls
Ukugqoka Njengomntu Omnye Uhlanga Oluthile LweHalloween
Musa ukukhohliswa! Isikhokelo seNkcukacha zeNkohlakalo zeWebhsayithi
I-French Preposition 'Entre': Indlela yokuSebenzisa ngayo
I-Neogene Period (i-23-2.6 yeMillion Years Ago)
Amalungelo amaPagan kunye neWiccans kwindawo yokuSebenza
Indlela yokudibanisa "i-Agacer" (kuAnoy)
Udwebo 101: Iyintoni iPaint opaque?
Iphepha lokusebenzela kwiMibutho kunye neMvume